an-trano > Travel Europe > Inona no The Best National Parks In Eoropa
Moa ve ianao tia ny lehibe any an-tokotany? Isika dia miresaka ala, farihy, zavamaniry, sy ny biby. tongotra lavitra, mitaingina bisikileta, ary ny fahatsarana ny rivotra madio amin'ny ankapobeny. Avy eo nahita ny tsara indrindra valan-javaboary any Eoropa, sy ny fomba ahatongavana any lamasinina.
Na dia nitsidika voajanahary manintona toy ny ala dia mety ho sarotra amin'ny train journey, izany no tsy misy antony tokony hanilika azy. Ireo manintona voajanahary manolotra ny tonga lafatra kosa ho an'ny sahirana tanàna, ary miaraka amin'ny fikarohana kely fotsiny, ho hitanao fa mahavariana izy ireo tonga amin'ny fanampian'ny Save A Train.
Na dia teo aza ny mampikorontan-tsaina anarana, Saxon Switzerland National Park Tena be amin'ny Alemaina. Faritra voajanahary midadasika izay manamorona ny avaratra andrefan'ny Repoblika Tseky. Izany ny firenena ihany no vatolampy valan-javaboary, fa izay koa tena feno ala. Maro ny lohany mankany amin'ny faritra handeha hiakatra, fa misy ihany koa ny mahavariana ny tantara mba hijery, anisan'izany ny Konigstein Fortress.
Ny tanàn-dehibe akaiky indrindra ho any amin'ny valan-javaboary dia Dresden, izay mora ny hahatratra ny lalamby avy amin'ny ankamaroan'ny Alemaina. From there, S-Bahn fiarandalamby mifandray amin'ny Saxon Soisa rehetra 30 minitra.
Raha ianao tany Alemaina, dia manoro hevitra anao koa ny mitsidika ny Black Forest. Eoropa afovoany angamba ny malaza indrindra ala, izany dia tsy misy ny tara. Ity faritra be tendrombohitra ity any atsimo andrefan'ny Alemana dia manana azy rehetra - ala maitso maitso, miavaka tendrombohitra, ary quaint tanàna. Tena an-trano ny cuckoo famantaranandro niaraka niverina tany amin'ny 1700s, SY vohitra maro mahatsiaro tena miraikitra amin'ny fotoana lavitra. ny Fairy-angano rivo-piainana mampisambotra tenany ho feno tanteraka escapism avy any amin'ny tontolo tena izy, raha izany no tadiavinao!
Ny iray amin'ireo fomba tsara indrindra traikefa ny Black Forest dia amin'ny alalan'ny fiaran-dalamby. The Black Forest tsipika mihazakazaka eo Offenburg sy Konstanz. Manolotra fomba fijery mahavariana momba ny faritra sy mijanona amin'ny tanàna maromaro teny an-dalana.
Hallerbos Forest, na "Ny Blue Forest", dia mahatalanjona ala tonga lafatra ho ela Toerana mahafinaritra fiakaran'ny. Ireo karipetra manga be mipoitra izay mipoitra tapaky ny volana Aprily manome isan-taona ny ala tsara tarehy. Misy ihany koa ny hazo goavam-be Sequoia izay manao fitsidihana ity mihinjitra tsara tarehy iray ny tany rejuvenating traikefa.
Mariho fa ny fotoana tsara indrindra mba hitsidika Hallerbos hamiravira bluebells dia tsy mitovy isan-taona, ary miankina amin'ny toetr'andro. Faingampaingana kokoa ho miakatra ny mari-pana, faingampaingana kokoa ny voninkazo mamony. Ankehitriny dia ho be ny fotoana ho any, satria toa nihanahafana kokoa ny faramparan'ny volana aprily tamin'ity taona ity. Saingy ny hazakazaka manohitra fotoana mafana ihany koa dia midika fa ny hazo mahazo ny raviny indray, tsy nety nomeny azy ny bluebells ny tara-masoandro, izay mahatonga azy ireo hiverina grayish. Tsy misy tsara noho ny Instagram pics!
Misy tapaka fiaran-dalamby avy any Brussels an'i Halle izay mandray fotsiny 16 minitra. From there, misambotra TEC isan'ny fiara fitateram-bahoaka 114 mba any amin'ny ala fidirana.
Raha toa ianao FANDRINDRAMPITERAHANA lava diany, aza hadinoina ny entana iray fanjonoana pole: ny rano eto na mikisaka amin'ny trondro. Ireo mpankafy reindeer dia hahita fa i Hardangervidda no iray amin'ireo valan-javaboary tsara indrindra ho azy ireo, toy ny omby ny sasany amin'ireo lehibe indrindra eto amin'izao tontolo izao. Tsy misy na inona na inona tena toy ny mijery an'arivony serfa hetsika mifanaraka manerana ny lemaka; fa ny fahitana rehetra dia tokony hahita amin'ny fotoana iray eo amin'ny fiainany.
Rehefa ianao ao Oslo, ilainao ka tsy tokony Hardangervidda lamasinina Azonao atao ny maka ny fiaran-dalamby avy any Oslo an'i Bo in Telemark. Avy eo dia afaka misambotra “Haukeliekspressen” ho Rauland. Azonao atao ihany koa ny maka ny Bergen Railway avy any Oslo ho maro ny toerana izay teboka fanombohana lehibe ho trandrahana Hardangervidda - Flam ny Myrdal, finoa, Haugastol, Ustaoset, sy Geilo.
Avy Bergen ny Hardangervidda lamasinina, Ny Bergen Railway dia mijanona amin'ny toerana maromaro izay toerana fanombohana tsara hijerena an'i Hardangervidda - Myrdal, finoa, Haugastol, Ustaoset, sy Geilo. Azonao atao ihany koa ny maka ny fiaran-dalamby ho any Voss sy fiara fitateram-bahoaka avy any Voss ho Eidfjord.
Te hampiditra ny lahatsoratry ny bilaoginay ao amin'ny tranokalanao ve ianao, Azonao atao na ny maka ny sary sy ny soratra sy marina hanome voninahitra miaraka amin'ny rohy amin'ity lahatsoratra bilaogy, na ianao dia tsindrio eto: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fnational-parks-europe%2F%3Flang%3Dmg– (Horonan-taratasy midina kely ny mahita ny Embed Code)
#Europeparks	#Valan-javaboary	#nationalparkseurope	europetravel	longtrainjourneys	Train Travel	travelbelgium	travelgermany	travelnorway	traveltips